Turkiga iyo Maraykanka oo si weyn ugu kala qeybsamay Fatxulaah Gulen iyo Andrew Brunson - BBC News Somali
Turkiga iyo Maraykanka oo si weyn ugu kala qeybsamay Fatxulaah Gulen iyo Andrew Brunson
Image caption Sheekh Fatxulaah Gulen waa wadaad caan ah oo leh taageero xoog badan
Waxaa sii socda ismaandhaafka u dhaxeeya dowladda Turkiga iyo tan Maraykanka, waxayna arrimaha salka ku hayaan labo wadaad oo midna masiixi yahay, midna muslim yahay.
Madaxweyne Erdogan iyo dowladda Turkigaba waxa ay Maraykanka ka dalabayaan in ay kusoo wareejiyaan wadaad lagu magacaabo Fatxullaah Gulen oo ku nool gobolka Pennsylvania.
Waxa wadaadkan lagu eedeeyay in uu ahaa maskaxdii ka dambeysay afgambigii dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay.
Erdogan oo maqaal ku qorey wargeyska New York Time ayaa yiri "Maraykanka waxa ay ku guuldareysteen in ay fahmaan waxa ay qabaan dadka reer Turkiga, illaa inta Maraykanka ka fahmayaan muhiimadda ay leedahay in ay xushmeeyaan qaranimadeena, ilaa inta taas dhacayso iskaashigeena mugdi ayuu ku jiraa".
Turkiga iyo Maraykanka oo joojiyay inta badan dal ku galkii ay isa siin jireen
Mareykanka iyo Turkiga oo laga cabsi qabo in uu dagaal ku dhex maro Suuriya
Waxa kale oo uu Erdogan Maraykanka ku eedeeyaa in aysan cambaareynin isku daygii afgembiga Turkiga ee sanadkii 2016-kii.
Maraykanka waa uu diiday in uu wareejiyo Gulen.
Ninkan waa baadari ka tirsan diinta masixiiga, waxa uu hoggaaminayay kaniisad ku taala magaalada Irsim ee dalka Turkiga.
Labo sano iyo dheeraad ayuu ku xirnaa Turkiga, waxaana lagu eedeeyay in uu taageere siiyay kooxo Turkiga uu u aqoonsanyahay argagixiso, kana mid yihiin kuwa Kurdiyiinta.
Trump oo fariin kusoo qorey boggiisa Twitter-ka ayaa sheegay in Bruson "afduub loogu heysto Turkiga, tahayna in la siidaayo".
Hadda waxa uu ku jiraa xabsi guri, dowladda Turkigana waxa ay diidday dalab kasta oo ah in ay ku siidayso, waxayna qabtaa in nidaamkeeda garsoorka uu go'aan ka gaaro sida laga yeelayo ninkan.
Dowladda Maraykanka oo taas ka carootay ayaa cunaqabatayn kusoo rogtay Turkiga, waxana canshuuro dheeraad ah la saaray birta iyo naxaasta Turkiga ee loo dhoofiyo Maraykanka.
Arrimaha kale ee ay isku hayaan
Labadan nin oo kaliya ma ahan waxa ay isku hayaan labadan dal, waxaase jira arrimo kale oo dhawr ah.
Waxaa ka mid ah taageerada uu Maraykanka siiyo kooxaha Kurdiyiinta ee ka dagaalama Suuriya.
Inkasta oo ay ka wada tirsanyihiin gaashaanbuurta NATO, haddane sanooyinkii dhawaa si wanaagsan uma aysan wada jaanqaadin.
Isu dhawaanshaha Turkiga iyo Iran ayaa kasii caraysiiyay Maraykanka, waxaana jirta in wasaaradda maaliyadda Maraykanka ay u yeertay bangi weyn oo laga leeyahay Turkiga oo lagu magacaabo Halkbank, kaas oo loo heysto eedeymo la xiriira in uu macaamil ganacsi la sameeyay Iran si khilaafsan cunaqabataynta dhaqaale ee dalkaas lagu soo rogey.